Elephone R8 smartwatch analysis, ọtụtụ maka obere | Akụkọ akụrụngwa
Taa, anyị na-ewetara gị nlegharị anya na-atọ ụtọ banyere ngwaahịa anyị chọrọ ịnwale. Smartwatches ka bụ otu n'ime ngwa ndị akachasị achọ taa iji mezue egwuregwu zuru oke na igwegharị anyị. Anyị enweela ike ịnwale smartwatch maka ụbọchị ole na ole Elephone, nke R8, anyị hụkwara ya n'anya.
Mbinye aka Elephone amaghizi na teknụzụ. N'ihi ọtụtụ ụdị ama ama jisiri ike nweta ntọala na ahịa gam akporo siri ike, ngwaahịa ndị ọzọ ha rutere na akụkụ nke ọrụ nkwado ahụ emere. Elephone's smartwatch bịarutere iji gosi na anyị nọ n'ihu ngwaahịa dị mma na ọnụahịa dị egwu.
1 Smartwatch zuru ezu na ọnụahịa nke smartband
2 Igwe anaghị agba nchara Elephone R8 smartwatch
3 Chepụta "n'elu" maka Elephone R8
4 Nnukwu na ịkọwa ọtụtụ
5 Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Elephone R8
Smartwatch zuru ezu na ọnụahịa nke smartband
Mgbe anyị na-echesi echiche ike ịnweta smartwatch, anyị na-ele ahịa anya mgbe niile iji hụ ụdị ọnụahịa anyị nwere ike ịkwaga. N'ezie, ọrụ ọla aka ghọrọ usoro a otutu n'afọ adịbeghị anya. Ma e nwere, na ụfọdụ, a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ adịghị adị dị n'etiti ụfọdụ smartbands na smartwatches.
Na-enyocha ahịa ntakịrị, ọ dị mfe ịchọta wristbands ọrụ na ahịa na ọnụahịa dị elu karịa R8 site na Elephone. Ọbụna nyochaa atụmatụ na arụmọrụ nke ha abụọ nyere, ha dị ọnụ karịa, ebe ha nwere ụfọdụ ihe na-erughị elekere. Maka nke a, na maka ọtụtụ ndị ọzọ ọ na-atọ anyị ụtọ na Elephone Smartwatch R8.
Chọta nguzozi n’etiti ịdị mma na ọnụahịa nke ngwa ahia bu ihe ndi n’iile choro inweta. Na ndị ahịa niile chọrọ ịchọta. Elephone bụ dị nnọọ nso iji pịa ntu ahụ n'isi na R8 smartwatch n'ihi ọtụtụ ihe. Dị otú ahụ a zuru ezu na-eche nche na na na-ele anya dị egwu ọ ga-efu nnukwu ego ma ọ bụrụ na ọ sitere n’aka ndị nrụpụta ọzọ. Elephone R8 abiala iji dozie ogwe elu na ebe a ị nwere ike inweta ya nwere ego na onyinye nkwado
Igwe anaghị agba nchara Elephone R8 smartwatch
Ọ bụrụ na anyị eleba anya n'ime igbe dị egwu nke smartwatch a, anyị ga-ahụ ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya ya. Na nche na ihu na-egosi ya na eriri ejikọtaghi, ọ bụ ezie na nke a bụ ihe ga-ewe anyị naanị obere sekọnd. Mgbe ị na-ewere ọkpụkpọ elekere a na aka gị, anyị na-achọpụta na anyị na-eche ihu ngwaahịa nwere opekempe nke ogo dị elu.
Anyị nwere odori USB na magnetik atụdo na jikọọ anọgide na ntukwasi-obi. Anyị agaghị achọ ime mgbalị ọ bụla iji jikọọ ha ebe ọ bụ na etinye ha dị mfe. Anyị nwere ike ịhapụ chaja mgbidi maka eriri USB, nke anaghị etinye n'ime igbe. Yabụ anyị ga-achọ ọdụ ụgbọ USB ma ọ bụ ọzọ nke anyị nwere. N’ikpeazụ anyị chọtara ụfọdụ akwụkwọ ikike na akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ dị mkpirikpi.
Chepụta "n'elu" maka Elephone R8
N’enweghị mgbagha Elephone's smartwatch design bu otu n'ime ike ya. Anyị ga-ahụ ya na nkọwa ya nke na - abụghị naanị otu. Anyị na-amalite site na elekere na gburugburu pịa, ihe nwere otu ọnụ ọgụgụ ndị na-akwatu gị dị ka ndị na-akwado ya. A nọ na a size na anyị nwere ike ịtụle "nnukwu" ya na nha nke 1,28 sentimita. Ọ dị mma maka ndị na-achọ elekere anya na-abụghị obere, mana ikekwe buru oke ibu maka ndị nwere obere nkwojiaka.
La pịa na-wuru nke metal alloy ihe na-agwụcha na-emetụ n'ezie obi ụtọ na-emetụ. Ejiri egbu egbu egbu maka anya dị ukwuu nakwa na ha nwere ibu nke na-egosi na anyị na-eche ihu ngwaahịa na-eguzogide ọgwụ ma dị mma. Ngwanro na interface nke Elephone mejuputara na R8 a na-eme ka ihuenyo niile were uru zuru oke.
Na akụkụ nke okirikiri anyị hụrụ otu bọtịnụ, nke dị n'akụkụ aka ekpe, nke dị mfe ịnweta ya na aka ya. Ihuenyo mmetụ aka nwere nhọrọ dị iche iche dabere na mmegharị ahụ anyị na-eme gbasara ya. Iji mmetụ anyị nwere ike ime ka ihuenyo ahụ rụọ ọrụ, ihe anyị nwekwara ike ime na ngosipụta nke ịgbanye nkwojiaka iji lelee oge.
Na azụ akụkụa nke okirikiri bụ ihe mmetụta maka nyocha nke obi. Nyere ya size, ọ na-eme ka a ngwa ngwa ọgụgụ n'oge ọ bụla na-enweghị ọnwụ uche. Na mpaghara ala dị ihe "pin" maka ichaji nke batrị ebe, dịka anyị kwurula, a na-etinye chaja n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Zụta Elephone R8 ke ukara website na nkwado onyinye na ego
Special aha kwesịrị Elephone R8 eriri. Ọ dị mfe itinye ya na / ma ọ bụ wepu ya site na obere taabụ nke o nwere na njedebe nke dị n'akụkụ okirikiri. Ihe na-eme ka ekwe omume belt na-agbanwe nnọọ mfe. Anyị hụrụ aka ya nwere, olee otú ọ dị mma na akpụkpọ ahụ na ìhè nke ihe eji arụ ya. Ihe na-enweghị mmetụta na mmetụta siri ike ya.
Nnukwu na ịkọwa ọtụtụ
Accessnweta nhọrọ nchịkọta nhọrọ nyere site na Elephone R8 anyị nwere ike slide na ihuenyo na anọ na-ekwe omume ntụziaka. Ọ bụrụ na anyị slide site n'elu ruo na ala anyị na-enweta menu ngwa ngwa nke anyị nwere ike ịhọrọ ọnọdụ "echegbula", "chọta ekwentị m" ma ọ bụ ọkwa nchapụta, n'etiti ntọala ndị ọzọ anyị nwere ike ịhazi yana ndị kachasị baa uru.
Ọ bụrụ na anyị slide site n'aka nri gaa n'aka ekpe anyị na-enweta ozi metụtara salud. Anyị nwere ike ịhụ nzụlite anyị na mgbanaka ọrụ (usoro, anya na calorie). Nweta a ọgụgụ nke obi anyị n'oge ma ọ bụ gụọ data na ukwu na àgwà nke anyị na-ehi ụra. Na-akwagharị site n’ala ala rue n’elu anyị nwere ike ịkpọ niile .ma Ọkwa na anyị ahaziwo inweta na smartwatch.
N'ikpeazụ, na-akwagharị site n'aka nri gaa n'aka ekpe anyị ga-enweta isi menu na nhọrọ nke elekere. Jikwaa egwu, ozi oge, elekere nkwụsị na ntọala ngwaọrụ maka ntọala dị elu. Nchịkọta zuru ezu nke ohere ndị na-eme Elephone R8 na-agba ọsọ dị ka otu n'ime nhọrọ kachasị adọrọ mmasị nke oge.
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Elephone R8
Ihuenyo 1.28 "
Mkpebi Pikselụ 360 x 360
Nguzogide mmiri / uzuzu IP68
Batrị 280 mAh
Onwe ya ruo ụbọchị 7 iji ya
Akụkụ X x 15.4 10.3 2.4 cm
Ahịa 42 10 €
Linkzụta njikọ Ekwentị R8
Tupu ị na-ekwu maka ihe kachasị mma na mmelite nke Elephone R8, ọ dị ka ọ dị mma ịza ajụjụ banyere ya ngwa ahụ nke ojiji. Anyị na-ekwupụta mgbe niile na ịnwe ngwa nke ndị nrụpụta na-eme ka ojiji nke ngwaọrụ ọ bụla dịkwuo mma. Ma n’oge a, anyị ahụla otú ọ ga-esi mee con ngwa ngwa nke atọ nwekwara ike ị nweta ọtụtụ ngwaọrụ dị ka nke a. Ngakọrịta dị mma nke ọma na ọnụọgụ nhọrọ dị iche iche anyị nwere na ngwa FitCloudPro.
El imewe nke Elephone R8 na-eme ya ezigbo smartwatch na-enye ya a adịchaghị anya.
na ihe eji eme ulo ma dara ọla alloy okirikiri na silicone nke eriri ya.
Nnọọ katalọgụ nke nhọrọ nhazi na ohere nke ojiji.
O doro anya ọnụahịa Ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa nyere ogo ọ na-enye.
Nwee ihuenyo okirikiri nke nwere sentimita 1,28 nwere ike ibu nnukwu elekere maka ụfọdụ anatomies.
Ibu ibu na ọtụtụ nwere ike ịmasị dịka ihe na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbochi nye ndị na-achọ ngwa ngwa ngwa ngwa.
Adabereghị na ya nkwụnye nkwụnye maka eletrik eletrik ọ bụ obere mmejọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Elephone R8 smartwatch nyocha